OnePlus 7 vs OnePlus 7 Pro: isbarbar dhig qoto dheer | Androidsis
Ficil ahaan tan iyo markii shirkadda OnePlus ay caan ku noqotay suuqa iyadoo lala socdo OnePlus One, terminal dhaqaale oo leh faa'iidooyinka ugu fiican ee xilliganShirkaddan Aasiya waxay suuqa ka bilaabayso moodooyin cusub, qiyaastii 6dii biloodba. Nooc kasta oo cusub ma aha oo keliya inuu waxyar kordhiyo qiimaha, laakiin sidoo kale faa'iidooyinka (in kasta oo aan had iyo jeer ahayn).
Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa in sanadkan uu doonayay inuu soo galo qaybta dhamaadka sare, ee dadka lacagta badan ku bixiya taleefanka casriga ah. Sannadkan, sharadka OnePlus waa laba terminaal: OnePlus 7 iyo OnePlus 7 Pro. Halkan waxaan ku tusaynaa a isbarbardhigga udhaxeeya OnePlus 7 iyo OnePlus 7 Pro.
1 Miiska isbarbardhiga OnePlus 7 vs OnePlus 7 Pro
2 Shaashadda AMOLED qof walba
3 Ma jiro nooc nooc ah
4 Qaybta sawirka
5 Awoodda iyo waxqabadka OnePlus 7
6 Qiimaha OnePlus 7 iyo OnePlus 7 Pro
7 Laba BUTS waaweyn oo kuxiran sida aad ufiiriso
8 Waa maxay OnePlus ayaan iibsadaa?
Miiska isbarbardhiga OnePlus 7 vs OnePlus 7 Pro
Ma jiro hab dhakhso badan oo muuqaal ah oo lagu hubiyo kuwaas oo ah farqiga ugu weyn ee u dhexeeya labada terminaal marka loo eego miiska. Jadwalkaan waxaad si dhaqso leh ugu arki kartaa kuwa ugu waaweyn faraqa u dhexeeya OnePlus 7 iyo OnePlus 7 Pro, kala duwanaanshaha aan hoos ku faahfaahinayno.
Screen AMOLED 6.41 inji - Go'aan 2.340 × 1.080 - 402 dpi - Heer cabir ah 90 Hz AMOLED 6.67 inji - Go'aan 3.120 x 1.440 - 516 dpi
Gacaliye Qualcomm Snapdragon 855 Qualcomm Snapdragon 855
Xusuusta RAM 6/8 GB nooca LPDDR4X 6/8/12 nooca GB LPDDR4X
Kaydinta Gudaha 128/256 GG 128 / 256 GB
Fursadaha furaya Dareenka faraha ee shaashadda - Aqoonsiga wajiga Dareenka faraha ee shaashadda - Aqoonsiga wajiga
Cámara trasera Xasilinta indhaha - Maamulaha 48 mpx f / 1.7 - Dugsi Sare 5 mpx f / 2.4 Xasilinta indhaha - Maamulaha 48 mpx f / 1.6 - Telephoto 3x 8 mpx f2.4 - Xagal ballaaran 16 mpx f / 2.2 xagal 117th
Kaameerada hore 16 mpx f / 2.0 oo leh xasilinta elektarooniga ah 16 mpx f / 2.0 oo leh xasilinta elektarooniga ah
Nidaamka hawlgalka OxygenOS oo ku saleysan Android 9 OxygenOS oo ku saleysan Android 9
Batariga 3.700 mAh oo leh taageero lacag la'aan ah 4.000 mAh oo leh taageero lacag la'aan ah
Peso Gram 182 Gram 206
Cabbirada 157.7 74.8 8.2 mm 162.6 75.9 8.8 mm
Midabada Mirror Gray Yicibta / Muraayada Gray / Buluug Nebula ah
Audio Hadalka Stereo - Dolby Atmos Hadalka Stereo - Dolby Atmos
Dekadaha USB 3.1 nooca C USB 3.1 nooca C
Qiimaha laga bilaabo 559 euro 709 euros
Shaashadda AMOLED qof walba
Shaashadaha leh teknolojiyadda AMOLED waxay na siinayaan faa'iidooyin taxane ah oo aan horeyba u soo sheegnay dhowr jeer, kan ugu soo jiidashada badan ayaa ah waxay noo ogolaaneysaa inaan keydino batteriga markaan isticmaaleyno midabbo madow. Markii la soo saaray Android Q, Google ayaa horeyba u xaqiijisay in nooca xiga ee Android uu hirgelin doono qaab mugdi ah, qaab laga heli doono dhammaan codsiyada shirkadda weyn ee raadinta.
The OnePlus 7 Pro kaliya nama siinayo shaashadda hore ee xiisaha leh iyada oo aan wax qaan gaar ah lahayn, laakiin sidoo kale waxay na siineysaa qiimo cusbooneysiin ah 90 Hz, Heer dib-u-cusbooneysiin ah oo na siinaya dheecaan badan iyo caddayn marka aan si dhakhso ah u roginno laakiin sidoo kale waxay noo oggolaaneysaa inaan ku raaxeysano cayaaraha ugu baahida badan hab dheecaan leh iyo muuqaal leh
OnePlus wuxuu ku faanaa in nooca 7 Pro waa kan ugu horreeya ee hirgeliya bandhig leh heerka cusbooneysiinta ee 90HZ, inkasta oo aysan ahayn ugu badnaan aan hadda ka heli karno suuqa, maaddaama iyada oo aan la sii soconin, taleefanka Razer wuxuu na siiyaa heer sare oo cusbooneysiin ah, 120 Hz iyo ku dhowaad laba sano, markii jiilkii ugu horreeyay ee taleefankan casriga ah.
Ma jiro nooc nooc ah
Soojiidashada ugu weyn ee ay bixiso OnePlus 7 Pro waxaa laga helayaa shaashadda, shaashad taas daboolaa ficil ahaan wajiga hore ee qalabka, oo ay ku jiraan dhinacyada, marka laga reebo aag yar oo hoose. Naqshadayntan macnaheedu maahan inaysan lahayn kaameero hore, maadaama ay ku taal qaybta sare ee terminalka oo dib looga noqon karo, taasi waa, way muuqataa oo way baaba'aysaa hadba baahidayada.
Dhibaatada tan ay abuuri karto waa haddii terminalku dhaco, laakiin dhibaato kasta xal ayaa loo helaa. Sida laga soo xigtay soo saaraha, hawlgalka kamaradda dib loo celin karo wuxuu ku xiran yahay xawaare-hawbiye, xawaare dheereeyaha haddii ay ogaato in terminalku dhacay, wuxuu si dhakhso leh u qarin doonaa qaybta kamaradda si uusan u jabin.
Dhamaan aad ayey ufiican yihiin marka hore. Laakiin waa farsamo, farsamo mooto oo waqti ka dib socota way joojin kartaa shaqada sababo la xiriira soo galitaanka boodhka ama wasakhda nooc kasta ah. Ama way ka jabi kartaa isticmaalka.
OnePlus 7 qaybtiisa, ayaa na siisa naqshad aad ugu eg jiilkii hore, oo leh qalabka ilmada ee u eg qaabkiisa hore ee qalabka. Haddii aad isticmaasho aqoonsiga wajiga si aad u furto terminalka, qaabkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si dhakhso leh u gasho terminaalka adigoon sugin qaybta hore ee qaabka Pro.
In kasta oo xaqiiqda ah in shirkado badani ay ku adkaysanayaan in taleefanka casriga ahi mar uun beddeli doono kaamirooyinka SLR (nacasnimo madax-bannaan), nasiib wanaag isticmaalaha waxay sii wadaan inay sii horumariyaan qaybtan sannad kasta guntooda, tan iyo casriga ayaa noqday aalad inta badan loo isticmaalo in lagu qaado nooc kasta oo sawir ama muuqaal ah, oo ay ku jiraan dhacdooyinka gaarka ah, badanaa loogu talagalay raaxada ay na siiso.
The OnePlus 7 Pro dooro inaad raacdo isbedelka suuqa oo aad dhexgasho 3 kamarad xaga dambe. Midka ugu weyn wuxuu na siiyaa xallinta 48 mpx, oo ay ku xigto lens-ka telephoto 8 mpx ah oo leh 3x weyneeyn iyo midka ugu dambeeya waa 16 mpx xagal ballaadhan oo leh xagal daawasho oo ah 117 digrii.
Qeyb ahaan, OnePlus 7 wuxuu na siiyaa, sidii kii ka horreeyay, 2 kaamirooyin xagga dambe, midka ugu weyn oo isku mid ah oo aan ka heli karno qaabka Pro oo leh 48 mpx xallin iyo midka labaad ee 5 mpx.
Awoodda iyo waxqabadka OnePlus 7
Midka cusub ee OnePlus 7 iyo 7 Pro waxaa maamulaya Processor-kii ugu dambeeyay ee Qualcomm, Snapdragon 855. Si kastaba ha noqotee, gudaha terminaalka iyo si loo caawiyo maaraynta nidaamka hawlgalka, waxaan helnaa noocyo kala duwan. Hal shay, labada OnePlus 7 iyo OnePlus 7 Pro labadaba waxaa lagu heli karaa noocyo ka mid ah 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB kaydinta iyo leh 8 GB oo RAM ah iyo 128 GB kaydinta.
Habka Pro ayaa sidoo kale laga heli karaa gudaha nooc ka mid ah 12 GB oo xasuusta RAM ah iyo 256 GB oo keyd ah. Intaa waxaa dheer, waxaa lagu heli karaa oo keliya mid ka mid ah saddexda midab ee nooca Pro-ka ah laga heli karo, maaddaama OnePlus 7 kaliya lagu heli karo midabka Muraayada Gray, in kasta oo nooc gaar ah oo casaan ah uu iman doono Hindiya iyo Shiinaha.
Labada terminaalba waxay bilaabeen nidaam 10 lakabka qaboojinta dareeraha celiya heerkulka taleefanka, xitaa haddii aan isticmaalno dhammaan awoodda ay na siiso.
Qiimaha OnePlus 7 iyo OnePlus 7 Pro
Sida aan ku arki karno shaxda kore, qiimaha bilowga ah ee OnePlus 7 ee nooca aasaasiga ah ee OnePlus 7 wuxuu ka bilaabanayaa 559 euro, halka nooca aasaasiga ah ee OnePlus 7 uu yahay 709 euro.
OnePlus 7 6 GB RAM + keydinta 128 GB 559 euros Mirror Gray
OnePlus 7 8 GB RAM + keydinta 256 GB 609 euros Mirror Gray
OnePlus 7 Pro 6 GB RAM + keydinta 128 GB 709 euros Mirror Gray
OnePlus 7 Pro 8 GB RAM + keydinta 256 GB 759 euros Muraayadda Cawl - Nebula Buluug - Yicibta
OnePlus 7 Pro 12 GB RAM + keydinta 256 GB 829 euros Nebula Buluug
Laba BUTS waaweyn oo kuxiran sida aad ufiiriso
Dhamaan noocyada 'OnePlus' oo dhan, illaa iyo markii ay shirkaddu soo bandhigtay qaabkii ugu horreeyay, weligeed weligood kuma ay soo bandhigin caabbinta la caddeeyay ee biyaha ku jirta boosteejooyinkeeda, caddeyn IP ah oo inta badan dhammaadka saldhigyada sare ee aan ka heli karno suuqa ay na siinayaan. Shahaadada IPxx waxay noo xaqiijinaysaa in terminaalkeennu u adkaysanayo tirada shahaadada ay heshay. Waxa ugu caansan waa IP68, shahaado noo xaqiijineysa in haddii terminaalku ku dhaco biyaha Waxyeello uma geysan doonto gelitaanka dareerayaasha.
Mid kale oo ka mid ah kuwa waa weyn laakiin waa inaysan na siinaynin nidaam lacag-bixin la'aan ah. Madaxa shirkada ayaa xaqiijinaya in rarka noocan ah uu aad u gaabis yahay. Si loo magdhabo gaabiskan, soo saaruhu wuxuu na siiyaa nidaam lacag deg deg ah oo taas ah waxay noo ogolaaneysaa inaan ku xirno terminaalka saacad ka badan. Ilaa hadda si fiican.
Ku-dallaca wireless-ka ayaa noo ogolaanaya inaanu dhigno terminalka dusha dusha xeedho si markaa lacag looga qaato iyada oo aan la isticmaalin fiilo. In kasta oo ay ka gaabinayso nidaamka fiilooyinka ku shaqeeya ee fiilooyinka leh (oo leh fiilo) habeenkii waxaan haysannaa in ka badan waqti ku filan oo aan ugu soo dallacno xawaaraha aad rabto, maaddaama aynaan qorsheyneynin inaan dibadda u baxno dhowr saacadood. Ku habboonaanta aan lahayn inaad raadiso fiilada inaad rarto terminal-ka waa shay markii aad ula qabsato aadan rabin inaad dib ugu laabato qaabkii soo jireenka ahaa.
Waa maxay OnePlus ayaan iibsadaa?
Markii hore, iyo sidii caadiga ahayd, waxay kuxirantahay miisaaniyada. Nooca Pro ee OnePlus iyo waxay leeyihiin farqi marka loo eego sida caadiga ah ee ah 150 euro, sida aan ku aragno qaybtii hore. Haddii aad haysatid kuwa 150 euro ka badan oo aadan garanayn waxa lagu sameeyo iyaga, qaabka Pro waa ikhtiyaar aad u fiican oo laga fiirsado, haddii aad caddeyso inaad u socoto OnePlus cusub.
Si kastaba ha noqotee, haddii aanad wali ku mashquulin waxa OnePlus u taagan yahay, hadda Waa fursad aad u fiican in la helo qaabkii hore, OnePlus 6T, moodeel sifooyin badan la wadaagaya OnePlus 7 cusub marka laga reebo processor-ka, taas oo ah farqiga ugu weyn. Moodelkan waxaa laga heli karaa Amazon iyo Ebay labadaba wax ka yar 500 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » OnePlus 7 vs OnePlus 7 Pro: isbarbardhig qoto dheer
Kuwani waa qiimaha la sifeeyay ee Sharafta 20 iyo 20 Pro [+ Tilmaamaha]
Xalka dhibaatooyinka dhibaatooyinka ogeysiisyada ee Xiaomi oo leh Notch